Sponsor အသစ် Zoomerang ကို Martech ကြိုဆိုပါတယ်! | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 12, 2011 တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 24, 2012 Douglas Karr
Martech တွင်စပွန်ဆာအသစ်အကြောင်းကြေငြာရန်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားပါသည် Zoomerang! Zoomerang သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာပံ့ပိုးသူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Analytics စပွန်ဆာနှင့်ပူးပေါင်းသည် - ဝက်ဘ်ဆိုက်များ။ (လူမှု၊ မိုဘိုင်း၊ ဘလော့ဂ်နှင့်အီးမေးလ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထပ်မံထောက်ပံ့ကူညီမှုများရှိသည်။ )
Martech ၏ခြေရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်တိုးချဲ့သည်နှင့်အမျှ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာရေဒီယိုပြ, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဗီဒီယိုများတကယ တွစ်တာ နှင့် Facebook က ရှိနေခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားနေသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသတင်းလွှာ (အပေါ်မှ Subscribe ကိုနှိပ်ပါ) ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်နှင့်ပိုမိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
နှင့်မိတ်ဖက် Zoomerang ပြည့်စုံတယ် ငါတို့စာဖတ်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးမယ့်ဘေးဘားမှာအပတ်တိုင်းမဲတွေ့လိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီအထဲဝင်ပါ၊ (ဤအရာကို RSS မှတစ်ဆင့်သင်ဖတ်ရှုလျှင်သေချာပါစေ တဆင့်နှိပ်ပြီးစစ်တမ်းကိုဖြေပါ).
Zoomerang ရှိအဖွဲ့ထံမှမယုံနိုင်လောက်အောင်အချက်အလက်အချို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည် infographics (ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမ ဦး ဆုံးနီးပါးအဆင်သင့်ပါ!), တင်ပြချက်များ, whitepapers, webinars, မိန့်ခွန်းများနှင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ! ကျေးဇူးပြု၍ Market Tools '(ခေါ် Zoomerang) လူမှုမီဒီယာမန်နေဂျာ Jason Miller ကိုကြိုဆိုပါ။ ဂျေဆန်အဘို့အဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုရေးသားပါလိမ့်မည် Martech Zone!
ဒီမှာ Zoomerang အတွက်သင့်အတွက်ကမ်းလှမ်းချက်ပါ။
ပထမ ဦး စွာ - သင်လုံးဝစာရင်းသွင်းနိုင်သည် အခမဲ့အခြေခံအကောင့် Zoomerang နှင့်အတူ! ထို့အပြင် Zoomerang မှကြင်နာတတ်သူများသည်သူငယ်ချင်းများ၏သူငယ်ချင်းများအတွက်တစ်နှစ်အတွက် Pro နှစ်ပတ်လည်အကောင့်ကိုဒေါ်လာ ၁၄၉ ဖြင့်သာပေးနေကြသည်။ Martech Zone; ဒါကပုံမှန်စျေးက $ 50 ပါ။ ယခုဝင်မည်!